MAXAA MAANTA KA DHACAY XARUNTA MAXKAMADDA GOBOLKA BANAADIR? |
MAXAA MAANTA KA DHACAY XARUNTA MAXKAMADDA GOBOLKA BANAADIR?
Kamagra Flavored for sale, acquire zithromax. Maxkamadda Gobolka Banaadir, ayaa waxaa maanta la horkeenay Agaasimihii Idaacada SKY Maxamuud Maxamed Daahir (Carab), Madaxii Wararka ee Idaacada Shabelle Maxamed Bashiir Xaashi iyo labada Suxufi oo kale, oo iyagu damiin lagu sii daayay billo ka hor.
Gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir Dr. Xaashi Cilmi Nuur, ayaa wuxuu ku dhawaaqay in ay furan tahay Maxkamadda, loona diyaar garoobo guda galka kiiska dacwadda ka dhanka ah Suxufiyiinta, hase ahaatee waxaan madasha soo xaadirin qareenadii difaaceysay Suxufiyiintaasi.
Gudoomiyaha, ayaa wuxuu Suxufiyiinta kula taliyay inay si deg deg ah ku qabsadaan qareeno difaacdo, wuxuu kaloo amray in labada Suxufi ee Xabsiga Dhexe laga keenay dib loogu celiyo, halka labada kale ee damiinta lagu sii daayayna, ay dib ugu laabtaan guryahooda.
Ka hor intii aanu furmin fadhiga Maxkamadda, ayaa wuxuu buuq ka dhashay funaanado ay xirnaayeen Maxamed Bashiir Xaashi iyo Maxamuud Maxamed Carab, oo ay ku buufsan tahay astaanta Idaacada Shabelle.
Ku Xigeenkii hore ee Xeer Ilaaliyaha Qaranka Maxamed Xasan, ayaa dood ka keenay funaanadahaasi, hase ahaatee waa ay ku gacan-seyreen Suxufiyiintu inay iska bixiyaan, laakiin wuxuu kolkii dambe uu ku dalbay Ciidamada Booliska ee ammaanka goobtaasi sugga.
Booliska, ayaa la soo sheegayaa in ay awood u adeegsadeen Suxufiyiinta, kana saareen funaanadihii ay xirnaayeen, inkastoo ka qaybgalayaasha dhageysiga Maxkamadda ay shaararkoodu u siibeen Suxufiyiinta, si iyagoo aan feero qaawanayn loo Maxkamadeeyo.
Maxay tahay sababta qareenadu aynaan u imaanin fadhiga Maxkamadda?
Abukaate Maxamed Nuur Sheegow iyo Abukaate Cali Xalane oo difaacaayay Suxufiyiinta u xiran Dowladda Somaliya, ayaa waxaa la rumeysan yahay inaanay fadhiga Maxkamaddu u imaanin, iyadoo la siyaasadeynaayo kiiska Maxkamadda.
Suxufiyiinta Magaalada Muqdisho, ayaa iska ogaa in natiijo la’aan ku soo dhammaan doonto fadhigii maanta, kolba haddii uu dalka saakay ka amba baxay Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaran Axmed Cali Daahir, oo isagu gacanta ku haayay kiiska ka dhanka ah Suxufiyiinta.
Xeer Ilaaliyaha, ayaa ka mid ahaa wefdi uu horkacaayay Sii Haayaha Wasiirka Wasaaradda Garsoorka iyo Dastuurka Somaliya Faarax Sheekh C/qaadir Maxamed, oo maanta ku sii jeeda Magaalada Ankara ee Xarunta Wadanka Turkiga.
Rajo xumo laga qabo Maxkamadaynta Suxufiyiinta
Waxaa rajo xumo laga muujinayaa fadhiga xigga fadhigii maanta ee Maxkamadda Gobolka Banaair, ee lagu doonaayo in markale Suxufiyiinta lagu soo taaggo Maxkamadda, iyadoo walaaca ugu badan ee laga qabo uu yahay, in waqti kaloo dheer ay qaadato, sidii Suxufiyiinta loo horkeeni lahaa Maxkamadda.
Xildhibaan Maxamed Axmed Kulmiye, ayaa Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh ku eedeeyay inay siyaasadeyneyso xariga Suxufiyiinta iyo Idaacadaha Shabelle & SKY, xilli Idaacadahaasi ay ka mid yihiin kuwooda loogu dhageysiga badan yahay ee Magaalada Muqdisho.
Si kastaba ha-ahaatee billihii la soo dhaafay, ayaa waxaa la dhihi karaa waxay Dowladdu xoojisay caburinta ka dhanka ah Saxaafadda madaxa banaan ee ka hawlgasha Magaalada Muqdisho.